Media Partnership Announcement for Samsung Galaxy Challenge 2019 – Gaming Noodle
ကျွန်တော်တို့ Gaming Noodle ဟာ Samsung Galaxy Challenge 2019 PUBG Mobile Tournament အတွက် Media Partner အဖြစ် တရားဝင်လက်တွဲခွင့်ရရှိခဲ့ပါပြီ။
Galaxy Challenge ဆိုတာကတော့ Claw Esports က ဦးစီးကျင်းပပြီး Samsung Myanmar က စပွန်ဆာပေးအပ်ထားတဲ့ ပြိုင်ပွဲတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ယခုပြိုင်ပွဲဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိဆုကြေးအများဆုံး PUBG Mobile Tournament ပြိုင်ပွဲတစ်ခုအဖြစ် ဆုကြေး သိန်း (၁၀၀) ကျပ်အထိ ပေးအပ်သွားမှာပါ။
အသင်းပေါင်း (၅၀၀) အထိ ပါဝင်ကြမယ့် ဒီပြိုင်ပွဲမှာ ပထမရရှိတဲ့ အသင်းဟာ သရေကျစရာ Chicken dinner အဖြစ် ဆုကြေးငွေ (၅၅) သိန်းအထိ ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
ယနေ့မှ စတင်ပြီး ကျွန်တော်တို့ Gaming Noodle မှလည်း Galaxy Challenge Group Stage နဲ့ Semi-final ပွဲစဉ်များကို တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲရဲ့ Main Event ကိုတော့ LAN event အနေနဲ့ ဇူလိုင် ၂၀ နဲ့ ၂၁ ရက်မှာ ခမ်းခမ်းနားနား ကျင်းပဦးမှာဖြစ်လို့ စောင့်မျှော်ပေးကြပါခင်ဗျာ။
ကြှနျတျောတို့ Gaming Noodle ဟာ Samsung Galaxy Challenge 2019 PUBG Mobile Tournament အတှကျ Media Partner အဖွဈ တရားဝငျလကျတှဲခှငျ့ရရှိခဲ့ပါပွီ။
Galaxy Challenge ဆိုတာကတော့ Claw Esports က ဦးစီးကငျြးပပွီး Samsung Myanmar က စပှနျဆာပေးအပျထားတဲ့ ပွိုငျပှဲတဈခုပဲ ဖွဈပါတယျ။ ယခုပွိုငျပှဲဟာ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ လကျရှိဆုကွေးအမြားဆုံး PUBG Mobile Tournament ပွိုငျပှဲတဈခုအဖွဈ ဆုကွေး သိနျး (၁၀၀) ကပျြအထိ ပေးအပျသှားမှာပါ။
အသငျးပေါငျး (၅၀၀) အထိ ပါဝငျကွမယျ့ ဒီပွိုငျပှဲမှာ ပထမရရှိတဲ့ အသငျးဟာ သရကေစြရာ Chicken dinner အဖွဈ ဆုကွေးငှေ (၅၅) သိနျးအထိ ရရှိမှာဖွဈပါတယျ။
ယနမှေ့ စတငျပွီး ကြှနျတျောတို့ Gaming Noodle မှလညျး Galaxy Challenge Group Stage နဲ့ Semi-final ပှဲစဉျမြားကို တိုကျရိုကျကွညျ့ရှုနိုငျတော့မှာ ဖွဈပါတယျ။ ပွိုငျပှဲရဲ့ Main Event ကိုတော့ LAN event အနနေဲ့ ဇူလိုငျ ၂၀ နဲ့ ၂၁ ရကျမှာ ခမျးခမျးနားနား ကငျြးပဦးမှာဖွဈလို့ စောငျ့မြှျောပေးကွပါခငျဗြာ။
We are honored to announce that we will be joining Samsung Galaxy Challenge 2019 PUBG Mobile Tournament as media partner.
Galaxy Challenge is organized by Claw Esports and sponsored by Samsung Myanmar. It is the biggest PUBG Mobile tournament in Myanmar so far with 10,000,000 Kyats prize pool. 500 teams will fight for grand championship and first team will be awarded mouth-watering chicken dinner of 5,500,000 kyats.
From now on, you can watch live broadcasting of group stage matches and semi-final of the tournament at our page. The main event of the tournament will be held asaLAN event on 20th and 21st July 2019.
Photo Credit : Claw Esports
#Samsung #GalaxyChallenge #ClawEsports #MediaPartner #PUBGM